Tsika yekuboora muIndia | Absolut Kufamba
Kuboora mhuno, nzeve kana zvimwe zvikamu zvemuviri kuisa zvishongo kana zvishongo itsika yekare zvikuru ichiripo nanhasi. Iyi tsika ine mavambo ayo mutsika dzekutangisa kuhupenyu hwevakuru mumadzinza emadzinza, kunyange hazvo izvozvi zvine chinangwa chekushongedza.
Imwe yenyika uko kuboora ndiko kwetsika zvakanyanya iIndia. Kubva pazera diki zvakajairika kuti vanhukadzi munyika ino vapfeke kuboora mhino nechinyakare kana chitendero chinoreva. Mune inotevera posvo, isu tichadzidza zvakawanda nezvetsika yekuboora muIndia.
1 Kwakatangira iyi tsika muIndia
2 Nei vakadzi veIndia vachipfeka kuboora mhuno?
3 Iko kuboora mumhino sechikamu che trousseau yemwenga
4 Uye mushure memuchato?
5 Unopfeka sei mhete iyi pamhino dzako?
6 Ndeapi marudzi ekuboora mhino aripo?
7 Dzimwe mhando dzekuboora
8 Kubaya kwakabvepi?
Kwakatangira iyi tsika muIndia
Kunyangwe iri chinhu chinonyanya kufarirwa munyika ino yeAsia, chokwadi ndechekuti kupfeka mhete pamhuno yaive tsika yakakurumbira pakati pevagari veMiddle East. Semuenzaniso, muTestamente Yekare mavhesi akaunganidzwa anoti Abhurahamu, wekutanga wevatatu madzibaba echiJuda, akatuma mushandi kunotsvakira mukadzi mwanakomana wake Isaka. Sechipo kumuroora, muranda akapfekedza mhete yemhino nemabhengi egoridhe.
Vamwe vanyori venhoroondo vanofunga kuti maMuslim ndivo vakaunza tsika yekuboora kuIndia muzana ramakore regumi nerimwe. Nhasi, kuboora kunoitwa muIndia kupfuura chero kupi zvako pasi.
Nei vakadzi veIndia vachipfeka kuboora mhuno?
Munyika ino, mhino haisi chete chikamu chemuviri wemunhu chakagadzirwa kunhuwa uye kufema, asi ine kukosha kwakanyanya. Sekureva kwemushonga weAyuverdic uye zvinyorwa zveIndia zvinopfuura makore zviuru zvitanhatu, mhuno inosanganisirwa nekubereka uye mhete dzirimo nehurongwa hwekubereka hwevakadzi.
Kubaya uku kunonyanya kuzivikanwa se "nath" kuIndia uye inonziwo inosimudzira pfungwa yekunhuhwirira uye kudzivirirwa kwakanyanya kubva kuzvirwere zvemumhino. Mamwe mazita aanogamuchira nde "nathni," "koka," uye "laung."
Iko kuboora mumhino sechikamu che trousseau yemwenga
Wanga uchiziva here kuti "nath" chikamu che trousseau yemwenga? Inotaridzirwa seyakanyanya kufadza nyama inogona kuroorwa nemuroora pamuchato wake sezvo mhino inofungidzirwa kuti yakabatana nemanzwiro uye zvebonde.
Pahusiku hwemuchato, muIndia mwenga anopfeka "nath." Iyi inoyera masendimita makumi maviri nemasere uye inosunganidzwa neketani nebvudzi. Babamunini vaamai vemwenga chete kana murume ndiye anogona kupa mukadzi iyi mhino yemhino uye ndiye chikomba chinobvisa uku kuboora kubva kumuroora semucherechedzo wekuguma kwehumhandara hwake. Kugashira "nath" kubva kumunhu wausingazive hakuna kufinhwa pane zvemagariro uye kunoonekwa sekuita kwekusazvibata.
Uye mushure memuchato?
Mune mamwe matunhu eIndia, iyo Nath inowanzoonekwa sechiratidzo chemubatanidzwa saka haibviswe kana mukadzi achinge aroora. Nekudaro, kana vakadzi vakafirwa, havachapfeke chero chishongo pamhuno.
Kunyangwe kukosha kwayo hakuna kudzikira senguva dzose, mazuvano vakadzi vasina murume uye kunyange vasikana vanogonawo kupfeka idzi mhete sechishongedzo chemafashoni, ndiko kuti, pasina chirevo chechitendero kana chetsika.
Unopfeka sei mhete iyi pamhino dzako?
Kazhinji zviri kuruboshwe kumhino kwepamuromo kunoiswa iyo «nath» asi kuchamhembe kweIndia nekumabvazuva, vamwe vakadzi vanowanzoipfeka pamhino yekurudyi. Kunyangwe vakadzi vanowona zvimbi zviviri zvinobayiwa mune dzimwe nzvimbo dzekumaodzanyemba kwenyika.
Kune rimwe divi, sekuda kuziva, mumushonga weAyurvedic zvinonzi kuboora kuruboshwe kwemhino kunoderedza marwadzo ekuenda kumwedzi uye kunobatsira kubereka, sezvo mhino yakabatana nenhengo dzevakadzi dzekubereka.
Ndeapi marudzi ekuboora mhino aripo?
"Nathuri": sirivheri diki kana goridhe mhete ine yakadzika midzi matombo.
"Laung": kuboora kwakaita kunge chipikiri.
"Guchhedar Nath": anozivikanwa nemaparera ake dhizaini anonzi "Basra Moti", ayo anonetsa kuwana.
"Pullakku": yakapfekedzwa yakaturikwa pakati pemhino mbiri mukuremekedza mwarikadzi Parvati.
Dzimwe mhando dzekuboora
Kuonekwa kwenzira nyowani dzekushongedza munguva pfupi yadarika kwakaita kuti indasitiri yekuboora ikurumidze uye vanhu vazhinji vanosarudza izvi zvekushongedza kuti vashongedze miviri yavo. Kwete chete kune kuboora mhuno chete asi kune mamwe akawanda marudzi akadai se:
Wepamusoro uye wezasi muromo: wechivanhu kuboora muAfrica neSouth America
Tsiye: inoitwa muEurope neNorth America kekutanga muzana ramakore rechiXNUMX. Icho chimwe chenguva dzazvino kuboora kunoitwa.
Septum: iringi yakavhurika kana yakavharwa inoiswa pasi pemhino septum kuratidza kuvhara kwemhepo kudzivirira mweya yakaipa kupinda mumuviri wemunhu. Inobva kuAfrica neIndia neSouth America.
Mutauro: chiitiko chakajairika muzvikamu zveSouth America neIndia. Semuenzaniso, vaMaya vekare vaiboora rurimi rwavo mumhemberero dzechitendero kuti vachenese mweya yavo.
Navel: yakave yakakurumbira muUnited States neEurope muzana ramakore rechiXNUMX. Zvisinei, dzimwe ngano dzinoratidza kuti muEgypt yekare kwaitove netsika yokupfeka kuboora kweguvhu.
Hazvizivikanwe zvechokwadi iko kuboora kwakazvarirwa kekutanga asi kudzidzira kubaya kwemuviri wemunhu yaive tsika yekare pakati pemadzinza ekare aipararira zvishoma nezvishoma, zvekuti hatigone kutaura nezve vanhu chaivo .
Kuboora kwaiitwa zvine chirevo chakasiyana kwazvo, kungave kwekunaka, kwekurapa, kwechitendero kana kwenzanga, sekuderedza zvimwe zviratidzo zvezvirwere, kutara nzira inoenda kune hupenyu hwevakuru kana pachiitiko chemuchato. Munhoroondo yese vakave vakakurumbira zvekuti hazvishamise kuti kushandiswa kwavo kwasvika mazuva edu. Nekudaro, mazuva ano vane zvarinoreva zvakanyanya, kunyanya kuMadokero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika yekuboora muIndia
Ndinoda kuve munyika iyoyo ine hasha uye kutanga, Mwari, ndichave ndiripo
Iwe unayo chero sosi yeiyi info?